Ny sidina Manchester-Boston sy Myrtle Beach dia amin'ny sidina Spirit Airlines izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina Manchester-Boston sy Myrtle Beach dia amin'ny sidina Spirit Airlines izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny Myrtle Beach, fanampim-baovao farany an'ny Spirit Airlines, dia manamarika ny fotoana voalohany nisian'ny sidina tsy miato mankany MHT any amin'ny fanjakan'ny South Carolina.
Spirit Airlines no kaompaniam-piaramanidina vaovao voalohany ao amin'ny MHT tao anatin'ny 17 taona ary manamarika vanim-potoana fanitarana vaovao ho an'ny MHT.
Nanomboka androany ny serivisy tsy an-kiato ataon'ny Spirit mankany Fort Lauderdale / Hollywood International Airport (FLL) sy ny Orlando International Airport (MCO) avy amin'ny MHT.
Tao anatin'ny enina herinandro monja, ny serivisy tsy an-kiato ataon'ny Spirit mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Florida Andrefana ao Fort Myers (RSW) sy ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Tampa (TPA) dia hanomboka ny 17 sy 18 novambra tsirairay avy.
Tonga ny fiaramanidina Spirit Airlines Seranam-piaramanidina Regional Manchester-Boston (MHT) sambany androany raha nankalaza ny fahatongavan'ilay mpitatitra vaovao ny seranam-piaramanidina. Nitondra vaovao manaitaitra bebe kokoa amin'izy ireo ny zotram-piaramanidina, nanambara ny fanampin'ny làlana tsy miato ary tsy miato mankany amin'ny Myrtle Beach International Airport (MYR) manomboka ny 20 aprily 2022.
"Seranam-piaramanidina isam-paritra Manchester-Boston Azo antoka fa ao am-panahy hankalazana anio! ” hoy ny talen'ny seranam-piaramanidina Ted Kitchens, AAE "Tianay ny miarahaba sy misaotra ny mpiara-miombon'antoka vaovao indrindra, Fanahy Air Madagascar, amin'ny fitondrana serivisy vaovao avy amin'ny MHT mankany amin'ny toerana efatra malaza any Florida ary ho an'ny serivisy vaovao any Myrtle Beach, South Carolina. Ary ho an'ireo mpandeha rehetra eto amintsika izay manidina amin'ny sidina voalohan'i Spirit androany - arahabaina noho ianao anisan'ny Making History Today! ”
Spirit Airlines no kaompaniam-piaramanidina vaovao voalohany ao amin'ny MHT tao anatin'ny 17 taona ary manamarika vanim-potoana fanitarana vaovao ho an'ny MHT. Myrtle Beach, fanampin'izy ireo vaovao indrindra, dia manamarika ny fotoana voalohany nanamoriana sidina tsy miato mankany amin'ny fanjakan'ny South Carolina.
"Fihetseham-po mahafinaritra ny afaka mitondra More Go ary manambara serivisy fanampiny amin'ny Andro Voalohany," hoy i Lania Rittenhouse, filoha lefitry ny Guest Experience & Brand an'ny Spirit, ary ny filohan'ny Foundation Charitable Foundation. “Fahafinaretana tanteraka ny manompo MHT. Mahita fotoana tsara izahay ary dodona ny hampiseho amin'ireo vahiny any New Hampshire ny antony maha-zava-dehibe ny Fanahy ny lanitra. ”
Nanomboka androany ny serivisy tsy an-kiato ataon'ny Spirit mankany Fort Lauderdale / Hollywood International Airport (FLL) sy ny Orlando International Airport (MCO) avy amin'ny MHT. Tao anatin'ny enina herinandro monja, ny serivisy tsy an-kiato ataon'ny Spirit mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Florida Andrefana ao Fort Myers (RSW) sy ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Tampa (TPA) dia hanomboka ny 17 sy 18 novambra tsirairay avy.
"Fanahy Air Madagascar dia mitondra ny mponin'i New Hampshire araka izay nangatahiny — toerana tsy misy fijanonana bebe kokoa sy vidiny mirary, ”hoy ny governoran'i New Hampshire Chris Sununu. “Noho io fiaraha-miasa mampientam-po io dia manana isika — sambany izay — sidina tsy miato avy any New Hampshire mankany South Carolina. Fahafahana lehibe ho an'ny Fanjakana Granite! ”
Ny MHT sy ny Spirit dia nanambara voalohany momba ny mpitatitra sy ny sidina vaovao tamin'ny 16 Jona 2021.